13 caricatures nke Nikolai Baskov, nke ihere na-eme anyị n'ihi ihe ụfọdụ, ọ bụghị ya!
O yiri ka ndị na-egwu ụlọ anaghị enwe mmasị na ndị na-ekiri ihe na-eju anya site na olu dị mma, na taa, ha na-asọwanye mpi na-enwe ihe karịrị otu square mita nke ncha, feathers na rhinestones!
Ma ọ bụrụ na n'oge na-adịbeghị anya n'ọsọ egwuregwu a, "eze ọjọọ" Philip Kirkorov na "eze glamor" Sergey Zverev ji obi ike na-eduga, ugbu a, anyị nwere ike ikwu n'enweghị ihe ọ bụla na agbanyeghị ọkụ nke Russia, Nikolai Baskov, agafeela ha niile! Ọfọn, anyị chịkọtara 13 n'ime ụdị ejiji egwu ya kachasị mma, ebe ọ bụ na ị ga - eti mkpu ... na ịchị ọchị!
1. Nikolai Baskov na uwe eze na Golden Gramophone 2015
Ee, n'ihi na, ọ dịghị mma ka ọ na-ejegharị na ndị isi ...
2. Eke aha onye a hụrụ n'anya
Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na mgbanwe dị mma ná ndụ na-amalite nanị site n'ịhụnanya onwe onye. N'ezie, onye na-ese ihe mere ka ndụmọdụ a dị nso n'obi ya ma mee ka ọ rụọ ọrụ dị oke mkpa!
3. Okpueze ahụ anaghị akụ
O yiri ka ọ bụ n'ememme nke inye onyinye nke ọla edo na 2017, "ike ntutu" nwere ike gwụrụ na ichere ka o kpuo ya okpueze, ma kpebie ime ya n'onwe ya. Ma nye ndị na-aghọtaghị ihe ngosi ahụ, ọ bụrụ abụ. N'ezie - "Eze"!
4. Puppet Ken enweghị ike ịbụ ihe mara mma!
Ọ bụrụ na ịbụ onye mbụ, nke kachasị mma na nke mara mma, mgbe ahụ, n'ebe niile, ọbụnadị n'etiti ụmụ bebi. Karịsịa ebe ọ bụ na Nicholas na abụ bụ aha, na enyi anyị ga-adaba!
5. Onye isi ala na-agba ọsọ gaa napụta
N'ezie, gịnị kpatara anyị ji achọ Batman, Superman ma ọ bụ Ninja na-azụ atụrụ mgbe anyị nwere dike - Mazi X?
Ee, ma chebaa ihe kpatara ya, ọ bụrụ na ị nwere ike ịdakwasi n'ụgbọelu n'ụgbọelu dị n'ụdị anyanwụ, dị ka Chineke Amon-Ra?
7. Ebube na Ahịa nke Oké Osimiri Ojii
Ọfọn, ọ bụrụ na "olu ọlaedo nke Russia" na-enwu ma na-ada ụda na mbara igwe, gịnị kpatara na ọ gaghị edozi onwe ya ugbu a ka ọ bụrụ onye na-achị oké osimiri, na-ekpuchi ọkpụrụkpụ ndị kasị baa uru?
8. Tiger-zebra ọgụ!
The Song Contest "New Wave" hụrụ onye ọ bụla n'oge ya, ma, o yiri ka ọ dị njikere maka ihe ọ bụla ma e wezụga ... ọdịdị nke anụmanụ na-amaghị na ya. Mana n'ozuzu ya, ka anyị ghara idakịrị njakịrị ahụ n'okpuru belt banyere ihe dị n'okpuru belt ahụ?
9. Ụdị nke obi
Ọ bụrụ na ndị Grik enweghị Chineke nke ịhụnanya, kama ọ bụ naanị Chineke, mgbe ahụ ka ha na-enwere anyị anyaụfụ!
10. Ịhụnanya dị mma mgbe niile!
"Echere m na nkwekọrịta nke ejiji na-ekwu na anyị nwere mmekọrịta dị nnọọ mma," Oksana Fedorova, enyi nke Nikolai Baskov, kwuru mgbe di na nwunye ahụ gosipụtara na ngosi nke gramophones gold dị ka ndị dike nke Grik ịhụnanya epic. N'eziokwu, mgbe ahụ na nke a, ọ dịghị onye kwere, n'agbanyeghị abụ "Ịhụnanya mmadụ"!
11. Caesar na ohu nwanyị
N'ụzọ doro anya, akụkọ ihe mere eme nke oge oge iji nye Nikolai Baskov aka ghọrọ onye na-agwụ ike, ọ malitekwara ọzọ. Ma maka ememe ọzọ nke Golden Gramophone Prize, na-acha ọcha blond adaworị na oyiyi nke eze ukwu Rom, Otú ọ dị, mgbe jide "Wanderer" maka arụmọrụ nke song, ọ bụghị nwunye nwanyị obi ụtọ si n'obí ya, ma Mermaid-Volochkov ...
12. Ulo oru
Nikolai Baskov bụ eze ukwu China? Ee, anyi amaghi anya, obu ezie na ...
13. Chọta Ezukpọ Pikachu!
12 nke kpakpando anyi, ndi choro ka ha di sexy, ma ihe mebiri ...
Nwanyị mara mma site n'Ijipt oge ochie ruo n'ụbọchị anyị
Madness na-aga n'ihu! N'agbanyeghị, ejiji ejiji nke Baskov abụghị ihe ọchị ma e wezụga na naanị umengwụ. Ị chere na onye ọbụ abụ ga - akwụsị ya?
Top-30 ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ke elu n'ikiri ụkwụ
Nkume dị egwu na-egosi na ndị na-emepụta ihe na-aga ime
20 ndị na-ejiji ejiji, nke ọ bụ oge ịzọpụta, ruo mgbe oge gafere!
Ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ: 15 ndị ​​na-eyi wigs!
Grey ma ọ bụ pink: Ndị ọrụ weebụ na-ese okwu n'ihi agba nke akpụkpọ ụkwụ!
12 ụdị Russia dị ụtọ 45+
TOP-25 dị oké ọnụ ahịa n'ụwa
30 Ejiji Ebube Ndị Na-agba Ọkụ Maka Halloween
N'okpuru ala: 35 ihe odide na-enweghị obi ụtọ nke ụlọ metro!
Nke a nwere ike ibute naanị mkpuchi: 35 ihe ngwọta dị iche iche
Ihe ị chọrọ n'ụlọ akwụkwọ - ndepụta
Mmeghari nke di na nwunye
Miranda Kerr kwuru banyere ịmara Evan Spiegel, ime nwa na nwa ọjọọ
Nne nne ochie na-echefu na ọ gafelata
Ụdị nkịta kachasị ewu ewu
Nne di na-abanye n'ime ndụ anyị
Ọrịa Pancreatic - mgbaàmà mbụ
Izu atọ mgbe a mụsịrị nwa, Natalya Vodyanova gara ala
Ejiri ejiji maka ogologo ntutu isi 2014
Uwe eji emeghe
Valentines aka aka
Kedu otu esi eme ememe ncheta nke 50 nke nwanyị?
Ịba ụba nke vitamin C
Nkịta Chrysoprase - Njirimara Ime Anwansi
Ihe nketa ụwa na Argentina
Nne nwanyị Natalie Portman kwuru banyere àgwà ya banyere ihe gbasara ụmụaka
Nkwupụta: Katy Perry ga-ebipụta vidio gba ọtọ
Idu ime mgbe IVF
Onye nkesa maka akwa akwa